अब सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा कार्डबाटै ! « Pen Nepal
अब सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा कार्डबाटै !
Published On : 16 August, 2020 7:31 am By : पेननेपाल
यात्रुले खरिद गरेको कार्ड एक वर्ष अवधिको हुनेछ । बीचमा पैसा सकियो भने त्यसैमा थप्न वा रिचार्ज गर्ने सुविधा छ । कार्डमा भएको पैसा खर्च भएन र फिर्ता लिन चाहे तोकेको स्थानमा गएर फिर्ता लिन वा अन्य सामान खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रणाली नेपालमा पहिलोपटक लागू हुन लागेको उनले बताए । गोरखापत्रबाट